Balayazh on izinwele ezimnyama
Ekuhunyushweni okuvela eFulentshi, "ukulayishwa" kusho "ukuphindisela", "ukugwaza". Futhi empeleni, nale mbala, inkosi ibonakala ibopha izinwele zayo, idala umphumela wemvelo weziphakamiso ezishisayo elangeni. I-balayazh enhle kakhulu ibheka izinwele ezimnyama.
Ukulayishwa kuhluke kanjani ku-ombre?
Lezi zinhlobo ezimbili zokwabelana zifana namasu kanye nomphumela, kodwa ama-stylists ngokuvamile ahlukanisa phakathi kwe-ombre ne-balaž. Ngokungafani ne-ombre, lapho ungabona khona umkhawulo ocacile wokukhanyisa, umbala endleleni yokulayishwa kwenziwa nge-strokes ebonakalayo eyenza ukuthi ingabonakali. Ngakho-ke, abaningi bahlambalaza ukukhwabanisa kwe-ombre ngenxa yokubonakala kwayo okungabonakali, okufihliwe kuphela ngokugubha nokugubha. Kodwa inqubo balayazh efanelekayo ngisho izinwele eqondile. Ngaphezu kwalokho, ngalolubala, kuphela uhla lwaphezulu lwezinwele luba lula, ngisho nemibala engu-2-3, okusho ukuthi isakhiwo nezimpande zonakaliswe kakhulu kunalokho lapho kukhishwa nge-ombre. Ukunciphisa izinwele zezinwele kule nkathi futhi kuhilela inqubo yokuphambana, ikhodi ilula kuphela lezozintambo ezibeka ubuso.
Izinhlobo zokubala izinwele
Isithombe se-balaja ebusweni obumnyama sisitshengisa ukuthambekela okuyinhloko kulo mbala. Okwokuqala, ukulayishwa okuphelele kwezinwele, lapho amathiphu elula lonke ikhanda. Lo mbala ufana nomthunzi, kodwa ukusabalalisa okuningi kombala okwenziwe kahle futhi okuqondayo kwenziwa, futhi amathiphu awawunqamuli ngokuphelele, kepha alula kancane amathoni amaningana.
Uhlobo lwesibili lwe-balaža, okushiwo ngenhla, ukukhanya kwezinwele ebusweni. Umbala onjalo uqaphele izinwele, futhi ufanelekile kulabo abangaqiniseki ngokuphelele ukuthi ukuhlolwa okufanayo nesithombe kuzoya kuye. Khona-ke ungazama ukukhanyisa izinkambo kuqala ebusweni, futhi uma umphumela ujabulisa, bese wenza ukucweba okuphelele. Imibala enombala enjalo ngesitayela sokugaya isisusa kakhulu idonsela amehlo ebusweni, inciphisa izici zayo futhi ifihle ukungapheleli kwesikhumba ezincane.
Futhi, ekugcineni, umkhuba wesithathu umbala wombala ebusweni obumnyama, uma amathiphu anikezwa umthunzi owengeziwe, noma kunjalo, ngokungafani ne-ombre enemibala, lokhu kwenziwa ngokucophelela futhi umphumela uthuthukisiwe futhi unhle kakhulu. Lesi sitayela sezintiwa sabizwa ngokuthi i-balage noma i-gradient ombre.
Ikhono lokubala umbala
Inqubo yalokhu kukhuliswa ayifani kakhulu nomdwebo we-ombre, noma kunjalo, kunzima kakhulu ukudala i-balaj ekhaya. Kungcono ukuphendukela kumuntu onguchwepheshe okwazi kahle ukukhomba izintambo, ukwelula kahle umbala, futhi ukhethe imibala yemibala eyovumelanisa kahle nomunye nomunye nokubonakala kwakho.
Umehluko omkhulu emisebenzini usezindlela zokusebenza ngebhashi. Inkosi yenza ama-stroke angemuva kakhulu, njengokungathi uboya izinwele zakhe. Lokhu kukuvumela ukuba udale umngcele okhanyayo, wemvelo, ongacacisiwe, ozobe ungamaqenjini ahlukene, ngaleyo ndlela udale umphumela wezinwele ezishisiwe. Ku-balaža, kusetshenziswe imibala emibala emibili: enye ivula amathiphu kanye nengxenye ephakathi kwezinwele, ingxenye yesibili iya phezulu. Ngezinye izikhathi, uma uboya bezinwele zakho zihle futhi kanjalo, inkosi ayikwazi ukudweba izimpande, kodwa ilula imingcele ye-shadow shades. Ukubheja kuthatha cishe isikhathi esifanayo njengomuntu wezinwele, njengendlela yokugcoba evamile noma ukukhwabanisa kwe-ombre.
Raincoats Women - Fall 2015
I-Twin-Set - Fall-Winter 2016-2017
Izicathulo ze-Ballet 2014
Iziketi zemikhaya - entwasahlobo-ehlobo 2015
Ama-sweaters anamathanga 2013
Izicathulo zasehlobo 2013
Izibhulu zezinsikazi zasehlobo 2013
Izinwele zokukhwabanisa - entwasahlobo-ehlobo 2014
Yeka ukuthi imfashini yokugqoka kanjani ekwindla 2013?
I-Valentino - Spring-Summer 2014
Winter winter jacket 2015-2016
Umswakama Milavitsa 2015
Idolobha elihlanzekile eRussia
I-Edema yobuchopho - izimpawu
Isaladi yesibindi sesibindi - iresiphi ye-classic yokudla okumnandi, konke okujwayelekile
I-Polba - izakhiwo eziwusizo
I-Historical Museum of Cordoba
Inhlanzi epholile kuhhavini - zokupheka ezilula kakhulu futhi zangempela zokudla okumnandi
Uhlelo lokuqeqesha amantombazane
Yini okufanele uyenze ehlobo?
Indlela yokugubha usuku lokuzalwa emvelweni ehlobo?
Inyama nama-mushroom ekhanda ukhilimu omuncu
I-cyst ye-ovari: izimbangela
Isitayela saseMpumalanga ngaphakathi
I-Herbicide kusuka kunokhula
Ama-panties ama-cool wesifazane
Ukubalwa kwezinombolo ze-Kabbalistic